Goormee ayay Real Madrid wada-xaajood la billaabi doontaa Paris Saint-Germain si ay kaga soo qaadato Kylain Mbappe? – Gool FM
Goormee ayay Real Madrid wada-xaajood la billaabi doontaa Paris Saint-Germain si ay kaga soo qaadato Kylain Mbappe?
(Madrid) 31 Luulyo 2021. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa qorsheyneysa inay u dhaqaaqdo soo xero gelinta xiddiga naadiga Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe iyadoo haatan qorsheysatay inay wada hadallo toos ah la billawdo dhiggeeda.
Los Blancos ayaa dooneysa inay wada xaajood toos ah la gasho naadiga reer France toddobaadyada soo aaddan si ay u hesho saxiixa Mbappe xagaagan maadaama uu galay sanadkii ugu dambeeyay qandaraaskiisa.
Majaladda 90min ayaa sheegtay inay fahansan tahay in 22-sano jirka weerarka ka ciyaara uu PSG ku war-geliyay inuusan kordhin doonin qandaraaskiisa iyadoo haatan heshiiskiisu dhici doono xagaaga dambe.
Si kastaba ha ahaatee, Madrid ayaa haatan PSG ku cadaadineysa inay xagaagan ka iibiso Mbappe maadaama kooxda Isbaanishka ah ay hubto inay bilaash ku heli doonto xagaaga dambe haddii ay xiddiga Faransiiska ah iyo kooxdiisa go’aansadaan inuu dhammeysto 12-ka bilood ee ka harsan heshiiskiisa.
Miyey Kooxda Astona Villa soo aqbashay dalabkii qiimaha sare ee ay Manchester City ka gudbisay Jack Grealish?